အမဲစက်နဲ့ ချွေးပေါက်တွေကို အပြည့်အဝ ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်မယ့် Odbo Nude Makeup CC cream! | CosmeticMyanmar
Home » Article » အမဲစက်နဲ့ ချွေးပေါက်တွေကို အပြည့်အဝ ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်မယ့် Odbo Nude Makeup CC cream!
Beauties တို့ရေ မျက်နှာရှိ အမာရွတ်တွေ၊ ချွေးပေါက်တွေ၊ အသားအရည် မညီညာလို့ စိတ်ညစ်နေရတယ်ဆိုရင် Beauties တို့အတွက် သတင်းကောင်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်။ Odbo Nude Makeup CC cream ဟာဆိုရင်ဖြင့် မျက်နှာ အသားအရေနဲ့ တသားတည်း ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပြီး အသားအရေ ပြာခြင်းကွက်ခြင်းတို့ မဖြစ်စေပါဘူး။ မျက်နှာပြင်ရှိ အဆီဖု၊ ဝက်ခြံ၊ အမဲစက်၊ ချွေးပေါက်တွေကိုလည်း ထိရောက်စွာ ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
SPF 15PA++ ပါဝင်တာကြောင့် နေရောင်ဒဏ် ကြောင့် အသားအရေ ပျက်စီးမှာကို စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ Waterproof ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ရေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ချွေးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူ မပျက်ပဲ တနေကုန် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Cream ပုံစံဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ အသုံးပြုတဲ့ အခါမှာ အရမ်း ကြီး ဖိဆွဲစရာမလိုပါဘူး။ ဒီတော့ အသားအရည်တွန့်လာမှာကိုလည်း စိုးရိမ်စရာမလိုသလို သုံးရတာလဲ အရမ်းကို အဆင်ပြေစေပါတယ်။
ဘယ်လောက်ပဲ အသားအရေ ညိုညစ်နေပါစေ အသားအရေကို ထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းကြောင့် ဝင်းပတဲ့ မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။ ဒီ ပစ္စည်းလေးကို Code 1- light beige နဲ့ Code2– natural beige ဆိုပြီး နှစ်မျိုးနှစ်စားခွဲခြားထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီ နှစ်မျိုးလုံးဟာဆိုရင်ဖြင့် မျက်နှာ ပြင်ပေါ်လိမ်းတဲ့ အခါမှာ ထူထူထည်းထည်းကြီးမျိုးဖြစ်မနေစေပဲ သဘာဝ အတိုင်း လှပနေစေမှာပါ။ ရေဓါတ်လည်း ဖြည့်တင်းပေးတာကြောင့် သီးသန့် Moisturizer မသုံးလည်း အဆင်ပြေစေမယ့် CC cream လေးဖြစ်ပါတယ်နော်။
သုံးကြည့်ချင်လို့မှာချင်သူတွေအတွက် ဒီ CC cream လေးကို DinkyDiana Online shopping မှာ မှာလို့ရပါတယ်နော်။
Image source : www.facebook.com/thaiproduct
ပျိုမဒီတို့နဲ့သင့်တော်လိုက်ဖက်မယ့် Concealer ရွေးချယ်နိုင်စေဖို့....